Ntuziaka dị mkpa na NetEnt's Street Fighter II Slot: LiveRoulette Blog - cheapinternetsecuritysoftware.com
Ofwa nke egwuregwu vidio bụ ebe dị iche iche dị iche iche n’oge a, yana ọtụtụ ụdị egwuregwu dị iche iche na-eme nke ọma n’ofe nyiwe gụnyere PC, console, na mobile. Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ ị nweghị ike imeri ndị ochie.
Ochie egwu egwu aghọwo nnukwu ebe na ụlọ ọrụ na afọ ole na ole gara aga, na-enwe mmasị na ihe ụtọ dị mfe nke ọtụtụ aha kpochapụwo na-agafe n’elu ụlọ. Omume ahụ emewo ọbụna ka nnukwu aha dị ka Nintendo ịhapụ ụdị ọhụrụ nke consoles ochie ha ka ndị na-egwu egwuregwu nwee ike ịmeghachi ụbọchị ebube ha. Ugbu a, ndị na-egwu egwuregwu ụlọ akwụkwọ ochie na-achọ ịgwọ na ụwa nke ntanetịime ntanetị, dịka otu n’ime egwuregwu vidio kachasị egwu abanyela n’ọgba egwuregwu ma dị njikere ibido asọmpi ahụ.
NetEnt agbanweela akụkọ mgbe ochie Street Fighter II ka ọ bụrụ oghere, mana ozi ọma anaghị akwụsị ebe ahụ. Obi dị anyị ụtọ ịkpọsa na anyị ga-enye ya naanị ndị egwuregwu anyị awa 48 zuru ezu tupu ọ pụta ebe ọ bụla ọzọ!
Ma gịnị ka ị ga-atụ anya na egwuregwu ahụ? Ntuziaka a na-enye nkọwa zuru oke na ihe niile ịchọrọ ịma banyere mgbakwunye ọhụrụ a na ụwa ntanetị, na-amalite site na ncheta maka ihe kpatara ịhapụ bụ nnukwu akụkọ.
Street Fighter II: Akụkọ Na-akpata Akụkọ Mgbe Ochie
Street Fighter II: Capcom weputara World Warrior na arcades na 1991, mana aha ahụ wee bụrụ ihe egwuregwu vidio mgbe ọ malitere na Nintendo SNES console n’afọ na-esote.
Egwuregwu ahụ bụ ama ama maka otu ọgụ otu ọgụ, ya na ndị agha echefu echefu dịka Ryu, Ken, Chun Li na Blanka na-alụ ọgụ n’ọtụtụ ebe dị iche iche. Ebumnuche nke egwuregwu ahụ dị mfe – iji ọtụtụ ihe ịmegharị iji kpochapụ ahụike onye iro gị ma merie ha n’ọgụ.
Street Fighter II bụ nnukwu ihe ịga nke ọma na ntọhapụ ya, ruo ugbu a, a na-eche na ọ rere na mpaghara nke nde 6.3. Ọ bụ n’ezie egwuregwu kachasị ere ere nke Capcom n’ihe dị ka afọ 20 wee bụrụ onye Resident Evil 5 meriri ya naanị na 2013. Ọgụ a na-alụ ọgụ kpochapụwo ka nọ n’ọnọdụ nke ise na ọnụ ọgụgụ ahịa nke ụlọ ọrụ n’oge ederede.
Mmetụta nke ihe okike Capcom agbatịgoro karịa ụwa egwu egwuregwu vidiyo. Street Fighter II toro wee ghọọ ọdịnala ọdịnala, yana ọtụtụ usoro na egwuregwu nke egwuregwu ewepụtara kemgbe ọtụtụ afọ. Ihe ịga nke ọma ya bụkwa isi ihe na – akpata ihe nkiri Street Street Fighter nke bụ nnukwu ihe atụ mbu nke Hollywood na – ele ụwa anya maka ịgba egwu maka mmụọ nsọ.
Ihe ị ga-atụ anya na Street Fighter II: The World Warrior Slot
Ihe nketa Street Street Fighter II pụtara na NetEnt nwere nnukwu ibu ọrụ mgbe ọ bịara na-emegharị ihe egwuregwu na njikwa egwuregwu n’ime egwuregwu oghere. Onye Mmepụta bụ otu n’ime ndị amara amara n’ịgba cha cha ma mee ọtụtụ ọnụọgụ ntanetị n’ịntanetị dabere na franchises, gụnyere Planet of Apes and Jumanji. Agbanyeghị, enwere ike ịrụ ụka na ịlụ ọgụ a hụrụ n’anya nke ukwuu bụ egwuregwu bọọlụ dị iche.
Ọ dabara nke ọma, egwuregwu egwuregwu Street Fighter II na-ejide mmụọ nke ihe mbụ ma weta ahụmịhe ụlọ akwụkwọ ochie nke igwu egwu na SNES n’ọtụtụ ụzọ ọhụụ.
All nke kpochapụwo alụso ị maara na ịhụnanya si Street ọgụ II: The World Warrior nọ na ukara oghere egwuregwu. Ndị na-egwu egwu ga-ahọrọ otu n’ime ihu asatọ ama ama ka ọ nọchite anya ha na arụmọrụ, yana akwụkwọ edemede na-egosi:
Ọ bụla agwa nwere ha Nkea na video egwuregwu na a ebu n’ụwa nke online ohere mpere. Karịsịa, ha nwere ọkwa dịgasị iche iche dị iche iche, nke a nwekwara ike inwe mmetụta na nsonaazụ ị rụzuru na nke ọ bụla.
The Street Fighter II oghere na-agụnye ọgụ ọgụ, na Balrog, Vega, Sagat, na M. Bison na-egosi na agba pụrụ iche.
-Lọ Akwụkwọ Ochie
The Street Fighter II oghere si nnukwu artwork bụ otu n’ime ihe mbụ ị ga-achọpụta mgbe ị mara egwuregwu. NetEnt ewepụla nkwụsị niile iji kpalite ụdị kpochapụ aha ahụ ma ọ dị ka a na-ebughachi ya ụbọchị SNES.
Ebumnuche nke oghere ahụ bụ ụlọ akwụkwọ ochie, na ndị agha, nzụlite, na ọdịyo niile bụ ihe ịtụgharị azụ na njikwa njikwa. Ojiji nke iji leta mkpirisi eji eme mkpebi n’etinyekwara ihe ozo n’egosighi egwuru-egwu.
Oghere ntanetị na-egosipụta ụdị isiokwu niile taa. Otú ọ dị, ndị kachasị mma abụghị nanị na-anabata isiokwu ahụ n’echiche, kamakwa jikwaa ịmegharị ihe ha n’ime egwuregwu ahụ. The Street Fighter II slot si NetEnt na-eme nke a n’ọtụtụ ụzọ, nke ọ bụla na-echetara gị ihe ọ dị ka igwu egwu egwuregwu mbụ na njikwa.
Dị ka nke mbụ, ị nwere ike ịhọrọ onye agha gị ma zute onye iro gị. Nchikota ị rụzuru na-esi na ya pụta wee chọpụta ụdị agwa kachasị emebi, yana ọrụ na-aga n’ihu ruo mgbe otu onye asọmpi enweghị isi ahụike fọdụrụ.
Atụmatụ dị ka nke a na-egosipụta oghere Street Fighter II site na egwuregwu ọdịnala ọdịnala ndị ọzọ n’ebe ahụ n’oge ahụ, ebe ọ na-enwetakwu ihe aha mbụ ahụ.
Etu esi egwu Street Fighter II: The World Warrior Slot
Yabụ ugbu a ị marala ihe ịtụ anya site na Street Fighter II slot, kedu ka ị ga – esi wee kpọọ ya? Nzọụkwụ mbụ na-ahọpụta onye agha gị. Nke a bụ n’ezie ihe dị mkpa karịa ka ị nwere ike ịghọta, dịka onye ọ bụla na-alụ ọgụ nwere mmetụta dị iche na iche nke egwuregwu ahụ.
Ihe RTP zuru ezu maka egwuregwu ahụ bụ 96.06%, ebe RTP maka agwa onye ọ bụla bụ:
Ryu: 96.02% Ken: 96.06% E. Honda: 96.05% Blanka: 96.08% Dhalsim: 96.04% Chun Li: 96.08% Guile: 96.04% Zangief: 96.08%
The fighter ị họrọ na-ahụ enịm na a agha na a random iro, pụta na-esi anwụde na-ekpebi onye-enweta nkwanye na ndị na-efunari.
Egwuregwu ahụ nwere ntanetị 5 x 5 ma ọ bụ otu n’ime ihe kachasị ọhụrụ iji jiri ụyọkọ ụyọkọ NetEnt na Avalanche. NetEnt akọwachaala ụyọkọ ụyọkọ n’oge gara aga dịka igwe na-enye ndị egwuregwu ohere ịkwalite ịkwụ ụgwọ mgbe ha nwetara ụyọkọ akara akara mmeri. N’ụzọ dị iche, onye nrụpụta kọwara Avalanche dị ka echiche na-ahụ akara ndị ahụ ga-adakwasị ka ha na-agba.
Ọtụtụ akara dị iche iche na-adaba na ihuenyo n’oge ọgụ gị, yana akara ngosi agwa nwere mmetụta dị mkpa na nsonaazụ ọgụ ahụ.
Ihe nnọchi agha gị na-emebi onye iro gị, ebe akara ngosi nke ikpeazụ nwere otu mmetụta na agwa gị. Ogwe ahụ ike dị n’elu ihuenyo na-eme ka emelitere gị etu agha si aga, ebe onye asọmpi na-efunahụ mgbe ahụ ike ha ruru efu.
Ihe nnọchianya ndị agha dị oke ọnụ ma na-abịa ma usoro mmeri na Mmeri, ebe akara akara dị ala bụ A, K, Q, na J. Nchikota akara anọ ma ọ bụ karịa na-eduga na mmeri, yana ikike nrite dabere na ọnụọgụ ị nakọtara.
Enwere ọtụtụ ihe na Street Fighter II oghere karịa ihe ndị ahụ bụ isi. Ihe okike nke NetEnt gunyere otutu igodo ama ama di iche iche, ya na otu ihe kachasi mkpa bu Wild Gauge.
Ihe nlere na ohia
A na-etinye nlele anụ ọhịa na egwuregwu kachasị na Beat the Boss Free Spins, nke anyị ga-abanye n’oge na-adịghị anya.
Ihe egwuregwu ahụ na-adọkpụ na-akọwa otú akara ngosi dị elu ọ bụla na nchịkọta mmeri na-eme ka ị nweta otu isi maka nlele gị. Ọ bụrụ nakọtara isi asaa ma ọ bụ karịa, a na-arụ ọrụ ahụ arụ ọrụ ugbu a, na atụmatụ Wild Combo nwere ọrụ.
Atụmatụ ndị dị na-adabere na njirimara ahọpụtara mana, n’ọnọdụ nke ọ bụla, ọ na-ahụ akara akara Anyịnya na-etinye na enweghị usoro n’ofefe.
Kpoo Boss Free Spins
Street Fighter II bụ onye a ma ama mgbe niile maka ndị isi ya, echefughikwa ihe egwuregwu ahụ n’oge ọ na-aga ụwa nke oghere ntanetị. Ozugbo i meriri agha na egwuregwu ahụ, ị ​​ga-abanye Beat the Boss Free Spins. Nke a na ngalaba nke egwuregwu na-ewepụta gị megide a boss na mmeri multiplier na-abawanye na bụla larịị. Ndị na-eme ọtụtụ ihe bụ:
Balrog: x2Vega: x3Babat: x5M. Bison: x10
The ụgbọala na-adọkpụ maka egwuregwu na-akọwa na ị nwere ike naanị ịkwaga n’ọkwa ọzọ site na ịkụ onye isi. Ọ bụrụ n’iburu mmadụ anọ ahụ, ị ​​ga – abụ onye mmeri n’agha mba ụwa ma ritekwa ihe nrite.
Fanye Mkpụrụ ego Gamble Njirimara
Ihe niile agaghị efu ma ọ bụrụ na ị merie ọgụ gị na otu ọkwa. Can nwere ike iji ojiji nke Insert Coin Gamble feature ka ịmalitegharia agha gara aga ma gbalịa ịchekwa akụkụ nke mmeri gị.
Egwuregwu Egwuregwu Car Smash
Ihe ikpeazu pụrụ iche nke oghere Street Fighter II na-eji kpalite ncheta nke aha mbụ bụ Car Smash Bonus Game.
A na-arụ ọrụ a mgbe ị meriri agha ma ị ga-ebibi ụgbọ ala iji nweta mmeri mkpụrụ ego na-enweghị atụ.
The Street Fighter II Slot – Vital Statistics
Na-enye RTP nke 96.06% Egwuregwu ahụ dabere na ntanetị nke ogidi ise na ahịrị ise Ndị agha asatọ na-egwu egwu na-enye ọkwa dịgasị iche icheEight dị iche iche Ngwakọta ngwakọta Ndị isi anọ nwere akara na-enye x2, x3, x5, na x10 multipliers typesdị abụọ nke akara ngosi dị oke – Mmeri na Mkpụrụ ego anọ dị oke ọnụ – A, K, Q, na J
Ihe ohuru na-emebu ihe omuma
Ochie egwuregwu azụ azụ na ejiji na nnukwu ụzọ n’oge ahụ. Old-school stars dị ka Mario na Sonic the Hedgehog na-eme ka ọnụnọ ha na-egwu egwuregwu mkpanaka, ma ugbu a, egwuregwu egwuregwu na-agba ọsọ ga-enwe mmetụta dị ukwuu na ụwa nke oghere ndị dị n’ịntanetị.
Oghere Street Fighter II sitere na NetEnt bụ ụzọ ọhụrụ iji nwee ọ titleụ aha aha akara ngosi, ya na iji ọtụtụ atụmatụ dị iche iche wee kpalite ncheta nke izizi.
Obi dị anyị ụtọ inwe ike ịnye ya dị ka naanị maka awa 48 tupu mmalite ya zuru oke, anyị ji n’aka na ọ ga-abụ mgbakwunye mgbakwunye na egwuregwu egwuregwu aka anyị.
Play Street Fighter II na LiveRoulette ma chọpụta otu esi eme ka ụwa ochie a dịghachi ndụ!
Tags:Blog dị Fighter LiveRoulette mkpa NetEnts Ntuziaka Slot Street
Mmasị nke ịkụ nzọ egwuregwu esighị ike nghọta. Ọbụna ma …